improvised စက်ဆီချောဆီနှင့်အတူကောင်းမွန်သောစအိုလိင်ဆက်ဆံရရန်5Tricks • Apricots®
improvised စက်ဆီချောဆီနှင့်အတူကောင်းမွန်သောစအိုလိင်ဆက်ဆံရရန်5Tricks
မကြာခဏဆိုသလိုစအိုလိင်ဆက်ဆံစီစဉ်ထားသည်မဟုတ်ကပေါ်ပေါက်အခါ, ထက်သောစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်လော့။ ကျမတို့ဟာဒီစိတ်ကူးအခွင့်အလမ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြံဖန်ရန်သင့်အားသွန်သင်တော်မူပါ။ ငါမကောင်းတဲ့ချက်မှတ်ထားမှုရှိနိုင်ပါသည်ကြောင့်ဘာပဲသင့်အခြေအနေ, စအိုလိင်ဆက်ဆံဘယ်တော့မှခြောက်သွေ့သောintentéis။
သံလွင်ဆီနှင့် 1 # ကိုအကောင်းဆုံးစအိုသုပ်လုပ်မည်
ဒါဟာ quintessential သဘာဝအစေးအသက်ပေတည်း။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိန်းကလေးနှင့်အတူညစာစားနေစဉ်, စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်မှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လျှင်ငါ said:
- ပျားရည်, ကျွန်တော်လိင်ချင်တယ်, ရေချိုးခန်း၌ရှိကြ၏။
သင်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဝှက်ထားလျက်ရှိသောရေနံကိုယူမေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။ သင်သည်မတည့်တစုံတမျိုးရှိသည်နှင့်အနည်းငယ်သာယူဖို့သတိရပါသည်နှင့်စူပါစေးင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့အံ့သြမိန်းမောမိန်းကလေးနှင့်အခြားအဆင့်အထိမြင့်တက်နောက်ကွယ်မှထဲကသင့်ရဲ့လိင်။
2 # NIVEA နဲ့ fondly
အဘယ်သူသည်ပုဇွန်ကဲ့သို့နီ, ကမ်းခြေကနေပြန်လာတော်မမူ, သူ၏ဇနီးကပြောသည်မူသန​​ည်း:
- သင် aftersun ရ, ဒီမှာလာကြ။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပြုမူရန်ရှိသည်သောသော့ကိုသိမ်းထားအခိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပူနွေးနေနှင့်ထိတွေ့ကောင်းတစ်ခုစာချုပ်ပြီးနောက်ကြောင့်အိုးထဲသို့နှစ်ပြီးလျှင်နှင့်မြည်းကိုညွှန်ကြား NIVEA ကိုရောက်စေဖို့အချိန်ပါပဲ။ အကြံပြုချက်များကို: သင်တို့ပြုသကဲ့သို့နမ်းမခံပါနဲ့, သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုအများကြီးပိုခံရကြလတံ့။ ထို့နောက်အလားတူလက်ဖျန်းချမ်းသာစွာသင့်ကြက်, Flip နှင့်မေတ္တာသည်ထိုးစစ်ကိုမွေ့လျော်။
3 # အဘယ်ကြောင့်သင်ကအကောင်းဆုံးသဘာဝအဒိန်ချဉ်ဟေလသလူကပြောပါတယ်ထင်ကြသနည်း
သင်သည်သင်၏လိင်တက်သည်ကိုပုံထားကြသောအခါဟုတ်ကဲ့, လက်ျာ, သဘာဝဒိန်ချဉ်ဖတ်, alucinaréis။ ရေခဲသေတ္တာထဲကနေအအေးဖြစ်ခြင်းကြောင့်စအိုနှင့်မိန်းမကိုယ်လိင်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်သုံးနိုင်တယ်သကဲ့သို့သင်တို့က, စအိုသို့မဟုတ် Pussy အတွက်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအာရုံကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်, 100% ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ ထိပ်ဖျား:-bits နဲ့ဒိန်ချဉ်ကျေးဇူးပြုပြီးသုံးပြီးရှောင်ကြဉ်ပါ။
4 # Egg နှင့်ရေခဲသေတ္တာအချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့သောနေ့။
အသစ်သောအရာကြိုးစားနေ၏ကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောသည်ရှုံးသည်။ ဒါဟာလိင်ဆိုင်ကိုသွားနှင့်တစ်ဦးအုန်း flavored စေးကောက်ဖို့ခေတ်နောက်ကျသည်။ စအိုလိင်ဆက်ဆံဖြစ်စေခြင်းငှါကြက်ဥနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်သံသယ? ကျနော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပြုပါရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်: သင့်မီးဖိုချောင်တွင်ရောက်နေသည့်အခါတစ်ပန်းကန်လုံးနဲ့ကြက်ဥcáscaloဖမ်းပြီးလင်ပန်းပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်မျှမတို့ shell ကိုသေချာပါစေ, သင်တို့မျက်စိပိတ်ဖို့လင်ပန်းပေါ်နှစ်ဦးစလုံးလက်ကိုတင်သင်ဖွင့်ဒီ texture နှင့်အတူ basted မင်းမှအစဉ်အမြဲလိုချင်ကြတယ်လို့မြည်းကိုမှာမြင်ယောင်ကိုစတင်ပါ။ ဤလေ့ကျင့်ခန်းသည်နောက်, သမိုင်းစေသည့်စိုက်ထူမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်, သင်အခြေအနေကိုအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းခဲ့ကြခြင်းနှင့်လည်းဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းထည့်သွင်းခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုမျှလျှင်5# သင်သည်လက်မှာအဘယ်သို့ပြုမည်နည်း တံတွေးသင့်အသက်တာကိုသက်သာစေသည်။
နှင့်သင်တန်း၏, ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးသဘာဝ hypoallergenic နှင့်တံတွေးပိုမိုရှိသမျှတို့သည်အစက်ဆီချောဆီ၏ထိတ်ထံသို့လာကြ၏။ သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြည့်အဝချက်ခြင်းတပ်မက်သောစိတ်၌ရှိကြ၏သည့်အခါသင့်ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်,: - နောက်ကွယ်မှ metemela သင်သည်ကြက်တံတွေးထွေးဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းကြည့်ဖို့ကြီးလိမ့်မည်, အဲဒီနောက်လက် spits နှင့်မြည်းကြာ .. သင်သည်ရှေ့တော်၌ရှိသည်လူတစ်ဦးစအိုလိင်ဆက်ဆံဖို့ထုံးစံပေမဲ့, ပိုမြန်သွားဘယ်တော့မှ၏ရစ်သမ်ထောက်ပံ့, သင်ပိုမိုအဆင်ပြေခံစားရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အရာရာကိုငါပေးမည်။ အကြံပြုချက်များကို: ပထမဦးဆုံးမှာ, တံတွေးခန်းခြောက်ကတည်းကကောင်းစွာအားလုံးစိမ်ရန်ရှိသည်များနှင့်သော်လည်းကောင်းအနည်းငယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
THE BEST စအိုမှလိင်ဆက်ဆံမှုခံစားရန်MALÚအကြံပြုချက်များကို
Malu: ငါအစောင့်အကြပ်င်ကျွန်မစအိုလိင်ဆက်ဆံကိုချစ်ငါသည်ငါ၏မြည်းစူပါဂုဏ်ယူပါတယ်, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာမင်းကိုငါအရှုးကိုသိသောကြောင့်, ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားင်အစဉ်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ချောဆီသယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်နေသားတကျဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိန်းကလေးများသည်မြည်းကိုငါတဖန်ပြန်စစ်ဘို့အဆင်သင့်ဖြစ် cerradito တဲ့ကြွက်သားဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့မေတ္တာကိုလိုအပ်သည်တူငါတို့သည်မ dilate အနည်းငယ်မိနစ်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ထင်ကြပေမည်။ ဒါကြောင့်သင့်ကောင်းတစ်စေး, ကောင်းတဲ့စကားနှင့်တင်ရန်သင်သည်အစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးစအိုလိင်ဆက်ဆံပျော်မွေ့သင်မမေ့နိုင်သောအချိန်ကိုပိုင်းခြားသိပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအတွက်ကို Mobile World Congress စဉ်အတွင်းတက္ကစီထွက် watch